कहाँ छ सार्वजनिक गाडीमा भौतिक दुरी?
कहाँ छ सार्वजनिक गाडीमा भौतिक दुरी? रिपोर्टरको अनुभव
रेणु त्वानाबासु भक्त्तपुर - शनिबार, मंसिर ६, २०७७
सारा संसारलाई कोरोना माहामारीले सताइरहेको छ। कोरोनाको भ्याक्सिन नबनिसकेका कारण जताततै ‘कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाऔं, भौतिक दुरी कायम गरौं र केही सामान छोएपछि स्यानिटाइजर वा साबुनपानीले हात धोऔं’ भन्न थालिएको धेरै भइसकेको छ। यी तीन स्वास्थ्य मापदण्ड आजभोलि मोबाइलको रिंगटोन, विज्ञापन, सोसल मिडियामा देख्न र सुन्ने गरेका छौं। साथै बैंक, अफिसका गेट बाहिर, पसल बाहिर टाँसिएको पनि देखेकै छौं।
भौतिक दुरी सकेसम्म दुई मिटर कायम गर्नु भन्ने छ। ती तीनमध्ये १० रुपैयाँ पर्नें मास्क लगाएको भने देखिन्छ। तर, पैसा नपर्ने भौतिक दुरी चाहिँ कसैले पालना गरेको देखिँदैन। त्यसमाथि यी दुईभन्दा महँगो स्यानिटाइजर त झन् कतिले प्रयोग गर्लान् र?
भौतिक दुरी भन्ने शब्द सार्वजनिक गाडी चढेपछि कुनै शब्दकोषमा नै छैन कि जस्तो लाग्छ। गाडीमा त भौतिक दुरीको त नामोनिसान हुँदैन। म आफू पनि सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्ने गर्छु।
सार्वजनिक गाडी नचढेसम्म माथिका तीनवटै स्वास्थ्य मापदण्ड याद हुन्छ। गाडीभित्र छिर्ने बित्तिकै दुइटा त गायब नै हुन्छ दिमागबाट। सायद, यस्तो सार्वजनिक गाडीमा चढ्ने सबैलाई हुँदो हो। याद गरेर पनि सम्भव नै छैन। चढ्नका लागि गाडीको ढोकामा छोइन्छ, त्यसपछि सिट छ भने त बसिहाल्यो नभए त उभिने बेला रडमा समाउनुपरिहाल्यो। यतिबेलासम्म अफिसमा भएको भए दुई–तीनपटक स्यानिटाइज गरिसक्थेँ होला। तर, सार्वजनिक गाडीमा आफू बस्नलाई सिट कहाँ छ भनेर दिमाग चलेको हुन्छ। स्यानिटाइज गर्ने कुरा त कताकता। सायद, अरूको पनि हालत यस्तै होला। सिटमा कहिले बस्न पाउने भनेर नै सोचिराखेका हुन्छन् यात्रुहरू।
गाडीबाट जब ओर्लिने समय हुन्छ, भौतिक दुरी याद आइहाल्छ, अनि आफंै देखेर हाँस्न मन लाग्छ। जहाँ नियम पालना गर्नुपर्ने त्यहाँ केही सावधानी अपनाएको हुँदैन। अनि गाडीबाट ओर्लिसकेपछि चाहिँ गन्तव्य पुग्न भौतिक दुरी कायम गर्दै जाने गर्छन् यात्रुहरु। म आफैं पनि। अफिस आएवपछि फेरि तीन मापदण्डको कडा पालना गर्छु, त्यो हो मास्क लगाउने, भौतिक दुरी कायम गर्ने र स्यानिटाइजर लगाउने वा साबुनपानीले हात धुने।
सरकारले ‘लकडाउन’ खोलिसकेपछि भौतिक दुरी कायम गराउने हिसाबले सार्वजनिक गाडीको दुईवटा सिटमा एकजना मात्र राख्न मिल्छ भन्ने निर्देशन दियो। तर, त्यतिबेला पनि यात्रु छैन भने यो नियम लागु भएको जस्तो देखिन्छ। यात्रु छ भने नेपालमा कोरोना नै छैन जस्तो लाग्छ। यात्रु हुने बेला त भौतिक दुरी भन्ने शब्द नै नभएसरी कोचाकोच गरी जान्थे, गाडीचालकले पनि यात्रु थपेको थप्ये कुदाइरहन्थ्यो।
तर, पछिल्लो समय त्यो नियम पनि हटाइएको छ। अहिले सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी हिँड्न आग्रह गरेको छ। साथै सार्वजनिक गाडीमा दुईजना नै राख्न पाइने भनेको छ। अब सार्वजनिक गाडीमा चाहेर पनि भौतिक दुरी कायम गर्न सकिँदैन।
अघि भनेजस्तै देखिने एउटा मास्क लगाएको छ। भौतिक दुरी त छँदैछैन। अर्को, पैसा पर्ने स्यानिटाइजर उपयोग त परै जाओस्। सार्वजनिक गाडीमा त झन् स्यानिटाइजरको नामोनिसान छैन्। सरकारले नियम भनेसम्म स्यानिटाइजर नभए पनि बोटल भए पनि थियो। अहिले त स्यानिटाइजरको बोटल पनि राखेको भेटिँदैन सार्वजनिक गाडीमा। त्यस्तै सहचालकले मास्क त लगाएका हुन्छन् तर चिउँडोमा।
कोही यात्रुले सहचालकलाई मास्क राम्रोसँग लगाउनू न, तपाईले गर्दा सबै यात्रुलाई जोखिम हुन्छ, कोरोना सर्न सक्छ भनेमा सहचालकको तत्काल जवाफ आउँछ– ‘मास्क लगाएपछि बोल्ने बेला आवाज नै कम सुनिएको जस्तो हुन्छ। त्यही भएर मास्क चिउँडोमा लगाएको। फेरि, यो कोरोना केही होइन जस्तो लाग्छ हो। अब कोरोना पनि खै निजी क्षेत्रका र हामीजस्ता गरिबका लागिमात्र हो जस्तो लाग्न थाल्यो है। सरकारी कर्मचारीले भने काम गर्न हुने हामी चाहिँ डराइराख्नुपर्ने। के हो? के हो?’
बिहानको अफिस टाइम र बेलुकी सार्वजनिक गाडीमा खुुुुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन। सार्वजनिक गाडीमा चाहिँ भौतिक दुरी र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नु नपर्ने हो? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यो व्यवस्थापन गर्ने काम कसको हो? के गाडीमा चढ्दा कसैले पनि कसैलाई छुँदैन वा कोरोना हुँदैन?
अहिले सार्वजनिक गाडीमा चढ्ने बेला मास्क र चढिसकेपछि आफू बस्न सिट महत्वपूर्ण हुन्छ यात्रुलाई। जहाँ अलिकति ठाउँ हुन्छ त्यहाँ बसिहाल्ने हो। सार्वजनिक गाडीमा चाहेर पनि भौतिक दुरी कायम गर्न नसकिने अवस्था छ। अरू ठाउँमा त सम्भव छ सार्वजनिक गाडीमा कसरी गर्ने भनिदिनुपर्‌यो। कोही पनि चाहँदैनन् आफूलाई कोरोना लागोस् भनेर।
अर्को, यो चाडपर्व आउने बेलामा भौतिक दुरी र स्यानिटाइजर कहाँ जान्छ? पुलिस, प्रशासन, स्थानीय सरकार कहाँ जान्छ यतिबेला? भीडभाडले बजारमा टेक्ने ठाउँ नहुँदा पनि कसैले केही गर्दैनन्। भर्खरै सकिएको तिहारमा जहाँजहाँ फलफूल पसल तथा चाडपर्वका लागि चाहिने सामग्री राखिएको थियो, त्यहाँ भौतिक दुरी, स्यानिटाइजर नै थिएन। अझ कुनै ठाउँमा त मास्क पनि लगाएका थिएनन्। यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको हो?
सबैको मनमा भएको प्रश्न– अफिसभित्र मापदण्ड पूरा गरिन्छ, आफ्नै सवारीसाधन नभएकाले अफिसबाट बाहिर निस्केपछि भौतिक दुरी र स्यानिटाइज गर्ने भन्ने स्वास्थ्य मापदण्ड चाहेर पनि पालना गर्नसकेका छैनन्।